ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ (၂၇) ညနေ သုံးနာရီခွဲလောက်မှာ ဖုန်းဝင်လာခဲ့တယ် အဖိုးဆုံးပြီတဲ့….။
ကျွန်မ မတုန်လှုပ်မိခဲ့ဘူး…။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဖိုးဟာ လေဖြတ်ပြီး အိပ်ယာထဲလဲနေခဲ့တာ ခုနှစ်နှစ်ရှိနေခဲ့ပြီ…။ ပင်ပန်းစွာနဲ(သေမယ့်နေ့ကို စောင့်မျှော်နေရတဲ့ ၀ဋ်ဒုက္ခကနေ ကျွတ်လွတ်သွားတာပဲ..။ လူဆိုတာ သေနေ့နဲ့နီးနီးလာကြသူတွေချည်းပဲမဟုတ်လား…။ သံဝေဂတွေကတော့ နေရာတိုင်းမှာ ရနေတာချည်းပဲ..။ အသက် (၉၂) ဆိုတာ လူ့ဘ၀မှာ အမျိုးစုံဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီးပြီ…။ ကျွန်မဆိုရင်တော့ အဲလောက်အသက်မရှည်ချင်ဘူး…။ ပြီးတော့ မွေးရပ်မြေကိုလည်း မပြန်ဖြစ်ခဲ့တာ (၁၅)နှစ်တာရှိခဲ့ပြီ…။ အဖိုးဆီကို အမေနဲ့အဒေါ်တွေ တစ်နှစ်တစ်ခေါက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အဲအထဲ ကျွန်မပါမသွားခဲ့ပါဘူး…။ အချိန်မရတာနဲ့ အလုပ်များတာနဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်ဖိုး ဈေးကြီးတာနဲ့ တကယ်တော့ အဲဒါတွေဟာ အကြောင်းပြချက်သက်သက်တွေပဲ…။ လူ့အသက်ထက် ဘာမှအရေးမကြီးပါဘူး…….။ စိတ်ထဲမှာလည်း ငါ့မွေးရပ်ကို အဖိုးသေမှပဲရောက်တော့မယ် ထင်ပါရဲ့လို့ တွေးခဲ့တာဟာ အကြိုနိမိတ်လို့ ခပ်လွယ်လွယ် ခေါင်းစဉ်မတပ်ဝံ့ပါဘူး..။ ပြီးတော့ခုချိန်မှာ ငယ်တုန်းက အဖိုး ကျွန်မတို့အပေါ် ဘယ်လိုနွေးထွေးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကို လွမ်းတမပြချင်တော့ပါဘူး…။
အဖိုးသတင်းကြားတဲ့ညနေဟာ တနင်္ဂနွေညနေဖြစ်နေခဲ့လို့ နောက်နေ့မနက် လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့က ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့တာမို့ အမေနဲ့အဒေါ်တစ်ယောက်ကို (၂၈)မနက်စောစော လေဆိပ်ဆင်းပြီး ဂိုးရှိုးအစီးခိုင်းရတယ်…။ ကျန်တဲ့ အဖိုးရဲ့ သားသမီးများကိုလည်းအကြောင်းကြားရတယ်…။ ကျွန်မနဲ့ အဒေါ်တစ်ယောက်ရယ် ဦးကြီးတစ်ယောက်ရယ်က (၂၉)မနက်လေယာဉ်နဲ့လိုက်သွားရတယ်…။ ဒါကြောင့် အဖိုးကို ငါးရက်ထားပြီးမှပဲ မြေချကြရတယ်…။ ပထမဦးဆုံး လေယာဉ်စီးတဲ့ အတွေ့အကြုံလေး ပြောပြ ချင်သေးတယ်…။ ကျွန်မတို့စီးတဲ့လေယာဉ်က တိုက်ရိုက်တာချီလိတ်ကို သွားတာမဟုတ်ပါဘူး …။ ကျွန်းပတ်လို့ခေါ်တဲ့ ဘတ်စ်ကားစီးသလိုပဲ ဟိုဂိတ်ဆင်း ဒီဂိတ်ဆင်းပေါ့…။ အဲယားရန်ကုန်လေယာဉ်နဲ့ မနက် (၁၁)နာရီတိတိမှာလေယာဉ်တက်ပါတယ်… လေယာဉ်သာပြောတယ် အထဲမှာ လျှောက်လမ်းက လူတစ်ယောက်စာ ကျပ်ကျပ်သပ်သပ်လေးပေါ့…။ အဒေါ်က တပ်ထဲကဆိုတော့ ဗီအိုင်ပီနဲ့အရင်ဦးဆုံး ခရီးသည်တွေမတက်ခင် လေယာဉ်ပေါ်တက်ရတယ်…။ နောက်မှာ ခရီးသည်တွေတဖွဲဖွဲတက်လာကြတာ ကြည့်လိုက်တော့ တရုတ်တွေအများဆုံး ပြီးတော့ မူစလင်ကုလားတွေပါတယ်…။ သူတို့ကိုကြည့်ပြီး ဘုရားတမိသွားတယ်…။ ဘုရား ဘုရား ခုတလော တရုတ်တွေ ကုလားတွေပါတဲ့ လေယာဉ်တွေက ပျက်ကျတတ်တာနဲ့ ငါတော့ ရောရောင်ပါတော့မယ်ပေါ့လေ…။ လေယာဉ်အားလုံးထဲမှာ ဒီလေယာဉ်က သက်တမ်းကြာပြီတဲ့ တခါတလေ မိုးရွာရင်တောင် မိုးယိုတယ်လို့ကြားဖူးထားတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့…။ မတတ်နိုင်ဘူး ရွေးစရာမရှိတော့ဘူး ဒီနေ့ရောက်မှဖြစ်မှာမို့ လေယာဉ်ရွေးစီးခွင့်လည်းမရှိတော့ဘူး…။ ကံပါလာရင်တော့ ဘာစီးစီးဖြစ်မှာပါလေလို့ စိတ်လျှော့လိုက်တယ်…။ လေယာဉ်က အတက်ကြမ်းအဆင်းကြမ်း လေယာဉ်မောင်းပဲမညင်သာတာလား စက်ပဲမကောင်းတာလား မပြောတတ်ပါဘူး…။ ဝေဟင်ပေါ်မှာ လေယာဉ်တစ်ခါ လှုပ်ခါတိုင်း ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မအဒေါ်ကတော့ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး ဘုရားစာရွတ်တာပဲ…။ လေယာဉ်ပေါ်ကျန်တဲ့သူတွေက တရုတ်တွေကတော့ အသံကျယ်ကျယ်နဲ့စကားများသူများပေါ့…။ လားရှိုးကိုရောက်တော့ ရာသီဥတုက အဆိုးကြီးမဟုတ်ပါဘူး…။ လားရှိုးကနေ မန္တလေးဆက်သွားပြီး ဆင်းတော့မှပဲ မိုးသည်းပြီး လေပြင်းတွေ တိုက်တာများ မြေပြင်ပေါ်ရပ်ထားတဲ့လေယာဉ်ကို လေတိုးတာ ယိမ်းထိုးနေပါရော…။ လေယာဉ် တက်မရတော့ အဲမှာတင် မိုးမတိတ်မချင်းစောင့်ရတာ တစ်နာရီလောက် ကြာသွားတယ်…။ စဉ်းစားသာကြည့် လေယာဉ်ကစက်မနှိုးထားတော့ လေအေးစက်ကမရ လူများတော့ ပိတ်လှောင်ပြီး ကလေးတွေက အသက်ရှုကျပ်လို့ငို… လေယာဉ်မောင်တွေက မိုးထဲလေထဲပြေးလွှားပြီး ကွင်းထဲက အမှိုက်တွေ သစ်ကိုင်းတွေပြေးကောက်ရ…။
မိုးတိတ်တော့ မန်းကနေ တာချီလိတ်ကိုအပျံမှာ ကိုယ်တွေကမောသွားပြီ တရေးအိပ်ပြီးလိုက်သွားလိုက်တာ နိုးလဲနိုးရော တာချီလိတ်ကွင်းကိုရောက်ပါပြီတဲ့…။ အဲချိန်မှာ လေးနာရီခွဲရှိနေပြီ တကယ်တမ်း သုံးနာရီခွဲလောက်ဆင်းရမယ့်ဟာ ကြံ့ကြာသွားခဲ့ရတာ မန်းက လေပြင်းမိုးကြောင့်ပေါ့…။ တာချီလိတ်က ဦးလေးအိမ်မှာ ခဏ၀င်နား တနေကုန်ထမင်းမစားထားရတော့ ဗိုက်ကစပယ်ရှယ်ကိုဆာနေပြီ…။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ရန်ကုန်ကစတက်တုန်းက ကော်ဖီနဲ့ မုန့်သုံးမျိုး…ကွင်းတစ်ခုရောက်ပြီး ပြန်တက်တိုင်း အအေးသို့မဟုတ် ကော်ဖီထပ်တိုက်သေးတယ်…။ ထမင်းမဟုတ်တော့ မတင်းတိမ်ဘူးလေ…။ မနက်စာကိုလည်း ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ ငှက်ပျောကောက်ညှင်းထုပ်လေးပဲ စားထားတာ.. ကားကပိတ်တော့ ကွင်းဆင်း နောက်ကျမှာစိုးလို့ ကိုးနာရီခွဲကတည်းက တက္ကစီခေါ်ထားခဲ့တာဆိုတော့ နေ့လည်စာဘယ်မှာ သွားစားရတော့မလဲလေ…။
ညနေစာစားပြီးတော့ အဒေါ်က ရေပါတခါတည်းချိုးသွားမယ်ဆိုပြီး ရေမိုးချိုးလိုက်တာ ခြောက်နာရီခွဲမှပဲ တာလေကိုစထွက်သွားရတော့တယ်…အဖိုးအိမ်ရောက်တော့ ခုနှစ်နာရီခွဲပြီ…။ အဖိုးက သူနေခဲ့တဲ့ အနောက်ဖက်က တစ်ထပ်အိမ်လေးမှာပဲ…။ အဖိုးကိုဆေးထိုးပြီး အခေါင်းထဲထည့်ထားလိုက်ပြီး အမွှေးတိုင် သစ်သီးတွေတင်ထားတာတွေ့တယ်…။ အဖိုးကိုအမွှေးတိုင်ထွန်းပေးပြီး ကောင်းမွန်ရာဘုံဘ၀ရောက်ဖို့ ဆုတောင်းပေးတယ်…။ နောက်နေ့ဧည့်သည်တွေကိုကျွေးမွေးဖို့ နောက်ဖေးမှာ အိုးကြီးအိုးငယ်တွေနဲ့ ချက်ပြုတ်နေကြပြီ…။ နယ်မှာ အလှူတွေ နာရေးတွေမှာ ဒီလိုပဲလာကူပြီးချက်ပြုတ်ပေးတဲ့ အဖွဲ့တွေရှိကြတယ်…။ ရှမ်းလိုတော့ မယ်ခိုးလို့ခေါ်တယ်…။ ရှမ်းဝတ်စုံတွေကို ဆင်တူဝတ်ထားကြတယ်…။ ကာလသားတွေကတော့ ဟိုတစုဒီတစု ဖဲဝိုင်းတွေနဲ့ ကစားနေကြပြီ…။ အဖိုးက ဗီယက်နမ်ပေမယ့် ရှမ်းပြည်မှာအနေကြာလာတော့ ရှမ်းထုံးစံကိုပဲယူလိုက်တော့တယ် တကယ်ဆို ဗီယက်နမ်ထုံးစံက တရုတ်နဲ့ခပ်ဆင်ဆင်လို့ဆိုကြတယ်…။ ဒါပေမယ့် တတ်သိနားလည်သူမရှိတော့ ရှမ်းထုံးစံကိုပဲယူလိုက်တယ်.. အုတ်ဂူကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ့်ငါးနှစ်ကတည်းက အဖိုးဝယ်ထားတဲ့ တစ်ဧကနီးပါးရှိတဲ့ ခြံမှာပဲ အဖိုးက သူသေရင် ဂူသွင်းဖို့ အဆင်သင့်ဆောက်ထားပြီးသား…။ အုတ်ဂူကတော့ ဗီယက်နမ်ပုံလို့ပြောတယ်…။ ဦးလေးက အဖိုးအခေါင်းမသွင်းခင်က ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလာပြတယ်…။ အဖိုးမှဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင် သံသယဖြစ်မိသွားလောက်အောင် အဖိုးရုပ်က လုံးဝအရိုးပေါ်အရေတင် အဖိုးလို့မှတ်မိစေတာ အဖိုးနှာခေါင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်….။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ့်ငါးနှစ်လောက်က အဖိုး ဗီယက်နမ်သွားလည်တုန်းက ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုး ခုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး….။ ဓါတ်ပုံကြည့်ပြီးမှ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ငိုမိတယ်….။
Posted by coral nyo at 04:45
8 May 2014 at 01:41
8 May 2014 at 13:41
so sad for hear that . I missed my granpa. R I P .
9 May 2014 at 08:58
အလွမ်းနှင်းဆီဖြူ ဖြူ. ဘယ်သူဆွတ်ခူးလို့ပေးပါ့မလဲ......
Happy Belated Birthday ANGEL....